Nezvedu - Tianfeng Environmental Zvekushandisa Technology Co., Ltd.
Zvakatipoteredza Zvishandiso Technology Co., Ltd.
Tine makore anopfuura gumi+ ekugadzira ruzivo
Isu tiri inotungamira inoshanda hutachiona hwekudzivirira nyanzvi, anti-bhakitiriya uye murazvo-unodzosera chipatara machira anoraswa ekugadzira. Nezvinhu zvedu zvemhando yepamusoro, isu tave mumwe wemakambani anovimbwa kwazvo muindasitiri kuchipatara.
Kuzvipira kwedu kuendesa mhedzisiro kwave kutigonesa kuvaka hukama hwakamira hwakareba nevatengi vedu pasirese uye kutevedzera zvinovimbiswa zvedu nguva dzese.
Suzhou Tianfeng Environmental Materials Technology, yakagadzwa muna2008, iboka rakazara rinoongorora zviyero zvemhando yepamusoro zvechipatara zvinokwanisa kuraswa nemano ekutsvagisa nekusimudzira, dhizaini nekugadzira. Zvigadzirwa zvedu zvinosanganisira zviyero zvinoraswa, machira emaketeni nemaketeni akadhindwa. Zvese zvine zvikorekedzo uye kupisa-chinyorwa chakabatanidzwa. Chizvarwa chedu chitsva chakaraswa maketeni akagadzirirwa kutsiva aivapo anoshandiswazve uye anogezwa maketeni nemari yakakosha yekuchengetedza pamwe nekuvandudza hutachiona hutachiona.
POLYPROPYLENE KUDZIDZISA MUZVI
Iyi tambo yekugadzira ndeye filament polypropylene fiber spunbonded nonwoven jira michina. Yayo mbishi zvinhu ndeye polypropylene (PP). Mucheka usina kuvezwa watinogadzira une simba rakakwirira, unyoro hwakanaka, kusava nemhosva, anti-bhakitiriya, ngura kuramba, simba repamusoro-dhiza uye kukwirisa mwero. Ruvara uye huremu hwejira hunogona kuve hwakasiyana zvichienderana nezvinodiwa nevatengi.
Makore gumi nematatu 'chiitiko chekugadzira chinoraswa macubicle machira
Yakaratidza kusangana nematanho epasi rese eanti-bhakitiriya uye murazvo unodzora.
Independent Anti-kwemabhakitiriya dzaFord.
Vanhu Vane Tarenda